nentim-paharazana Trend - MT4 MARIDREFIN'NY
Alahady, March 7, 2021
Home MT4 MARIDREFIN'NY nentim-paharazana Trend
Mametraka antontan-kevitra fironana ho any an-mora ny sary an-tsaina barany. Blue dia ny, Mena no teo. Miasa amin'ny toe na oviana na oviana.
Fironana famantarana dia olona maro ny toe-javatra. Mampiseho ny tari-dalana (mena) sy ny hery (manga) ny fironana ho toy ny roa-mena histogram. Ny tena famantarana ireo, ny fitana ny aotra tsipika, vaovao mahatratra ambony / ambany, divergence.
Raha ny mena sary dia lehibe noho aotra ary maniry – mandeha bullish (Raha miaraka amin'izay koa, ny manga sary dia latsaky ny aotra sy riandrano – ny uptrend Miha-mafy orina kokoa)
Raha ny mena sary dia latsaky ny aotra sy riandrano – mandeha bearish (Raha miaraka amin'izay koa, ny manga sary dia lehibe noho aotra ary maniry – ny downtrend Miha-mafy orina kokoa)
Common masontsivana – masontsivana izay misy fiantraikany roa andalana:
“Ampiharo ny”. Ny fototry ny kajy ny mpanondro. Amin'ity tranga ity dia ny vidiny – Close, Open sns.
Masontsivana ny fironana tari-dalana tsipika (tsipika mena). Ny fironana tari-dalana ao amin'ny iTrend dia kajy miorina amin'ny Bollinger Bands pamantarana ara-teknika, ka noho izany ny iTrend tari-dalana dia manana fironana mitovy toe-javatra toy ny Bollinger Bands:
“Mode”. Mamaritra ny Bollinger Bands andalana ampiasaina amin'ny fikajiana ny iTrend: Main, Top na Ambany.
“fe-potoana”. Ny fe-potoana ny iTrend famantarana
“Fiviliana”. Ny fahadisoan-dàlana ny iTrend famantarana
Masontsivana ny fironana hery tsipika (tsipika manga). Ny andalana ny fironana hery ao amin'ny iTrend dia kajy miorina amin'ny tondro ara-teknika amin'ny Alexander Elder – Bears Power sy ny Bull Power
“fe-potoana”. Ny fironana ny iTrend tsipika.
Nentim-paharazana Trend dia Metatrader 4 (MT4) mpanondro sy ny toetra fototry ny forex mpanondro dia ny hanova ny nanangona angon-drakitra tantara.
Trend nentim-paharazana dia manome ho an'ny fahafahana mamantatra mampihavaka isan-karazany sy ny lamina ao amin'ny vidiny fihetsehana izay tsy hita maso ny mitanjaka maso.
Ahoana ny fametrahana nentim-paharazana Trend.mq4?
Download nentim-paharazana Trend.mq4
Copy nentim-paharazana Trend.mq4 ny Metatrader Directory / manam-pahaizana manokana / tondro /
Tsindrio eo amin'ny nentim-paharazana Right Trend.mq4
Famantarana Nentim-paharazana Trend.mq4 tsy ampy amin'ny Chart
Nentim-paharazana ny hanesorana Trend.mq4 amin'ny Metatrader 4 Tabilao?
Previous lahatsoratraStrength Arrow